22 ENY, 250 TSIA: Zurab Pololikashvili ho an'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » 22 ENY, 250 TSIA: Zurab Pololikashvili ho an'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • malaza ankehitriny • WTN
Roa herinandro eo ho eo vao hivory ao Madrid ny fivoriamben'ny UNWTO hanapa-kevitra raha hohamafisina ny tolo-kevitry ny filankevitra mpanatanteraka nanomboka tamin'ny Janoary mba hanamafisana ny Sekretera jeneraly ankehitriny amin'ny fe-potoana hafa.
Maro amin'ny indostrian'ny fizahantany maneran-tany no manantena ireo minisitry ny fizahantany hanokatra ny lalana ho amin'ny fifidianana vaovao noho ny hamaroan'ny fanontaniana sy olana izay nanome ny SG ankehitriny ny toerany.
Raha sanatria ka ny 1/3 amin'ireo firenena mifidy amin'ny Fihaonambe ho avy dia tsy hanamafy indray an'i Zurab Pololikashvili ho sekretera jeneraly ho an'ny UNWTO fanindroany, dia misy dingana tsotra efa napetraka hanendry olona hisolo azy.
Raha toa ka tsy misy ny fifidianana indray ny Sekretera Jeneraly, ny Fihaonambe dia handray fifanarahana ao amin'ny fandaharam-potoana laharana faha-9 amin'ny Fifidianana ny Sekretera Jeneraly, izay manome baiko ny Filankevitra Mpanatanteraka hanokatra dingana vaovao amin'ny fanendrena ny UNWTO. Sekretera Jeneraly.
Fanadihadiana a eTurboNews dia manondro fandavana be loatra ny fanamafisana indray an'i Zurab Pololikashvili.
eTurboNews nangataka ireo minisitra, solontena ary mpikambana ambony ao amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahantany maneran-tany mba hanome ny eritreriny momba ny fifidianana indray ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO amin'izao fotoana izao amin'ny fe-potoam-piasana faharoa.
Ny fe-potoana faharoa dia natolotry ny Filankevitry ny Mpanatanteraka UNWTO tamin'ny 20 Janoary, nampiakatra ny sain'ny maro momba ny fomba nitrangan'ny dingana.
eTurboNews hatramin'ny androany dia nahazo valiny 272 ka ny 22 ihany no te-hanamafy azy ho filohan'ny UNWTO mandritra ny fe-potoana faharoa.
Avy any Albania, Aotrisy, Arzantina, Aruba, Aostralia, Bangladesh, Bahamas, Barbade, Bolgaria, Belzika, Bénin, Brezila, Bolgaria, Kanada, Shina, Ekoatera, Eswatini, Frantsa, Alemaina, Georgia, Ghana, Hong Kong, Hongria ireo valinteny ireo. , India, Indonezia, Irlandy, Israel, Italia, Irlandy, Jamaika, Jordania, Kenya, Letonia, Malezia, Maorisy, Meksika, Montenegro, Mozambika, Namibia, Nizeria, Norvezy, Filipina, Polonina, Portugal, Saint Lucia, Sénégal, Sierra Leone , Afrika Atsimo, Arabia Saodita, Seychelles, Espaina, Somalia, Soeda, Syria, Tanzania, Thailand, Oganda, Emirà Arabo Mitambatra, UK, Ukraine, Oganda, Etazonia, Venezoela, Zambia.
eTurboNews Ireo mpamaky amin'ny toerana lehibe mpitarika dia nanao ireto fanehoan-kevitra manaraka ireto mba hanamafisana (ENY), mba tsy hanamafisana (TSIA). Ny valinteny sasany dia avy amin'ireo solontena mpifidy (minisitra), ny hafa avy amin'ireo mpikambana lehibe ao amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahantany manerantany.
Mazava ho azy fa ny tena fihainoana ny fanamafisana indray ao Madrid ao anatin'ny 2 herinandro eo ho eo dia ho fanapahan-kevitry ny minisitra na ambasadaoro manatrika amin'ny anaran'ny minisitra ihany.
Mitaky firenena iray ny mangataka fifidianana miafina ary misoroka ny fanendrena amin'ny acclamation.
Heverin'ny manam-pahaizana fa tena ilaina izany mba hisian'ny latsa-bato fanamafisana indray.
Fandresen-dahatra azo tamin'ny latsa-bato ENY:
Mila fitohizana amin'ny famerenana ny fizahantany ho amin'ny Normale. Amin'izao fotoan-tsarotra sy hetsika tsy mbola nisy hatrizay izao dia tokony hanana olona zatra amin'ny raharahan'ny Fizahantany isika ary manangana tambajotra miaraka amin'izao tontolo izao.
Miaraka amin'ny traikefa taloha Zurab Pololikashvili dia afaka miatrika ny toe-javatra sarotra ankehitriny. Tokony hanohana avy amin'ny fontsika amin'ny lafiny rehetra isika ary hanao toy ny ekipa. Andriamanitra Tsitoha anie hitahy antsika rehetra. Ameen.
Mazava ho azy fa tokony hohamafisina izy, raha tian'ny vahoaka hiverina izy dia tokony hanao fe-potoam-piasana fanindroany Ny tena ilaintsika dia fahendrena amin'ny zavatra toy izao mba tsy ho variana amin'ny saina, misy olana hafa manenika ny indostrian'ny dia amin'izao fotoana izao. Tokony ho tapa-kevitra sy hifantoka isika.
Hetsika tsara indrindra
Fandresen-dahatra azo ho an'ny TSIA:
Tsy innovator sy rehetra
Izay rehetra afaka sy vonona ny hijery, hihaino ary hahatsapa ao ambadiky ny sehatra dia mahafantatra fa Zurab P. no Jeneraly Sec UNWTO ratsy indrindra hatramin'izay. Indrisy anefa fa mitaratra an'i Georgia izany, izay azo inoana fa tsy manana fiantraikany betsaka toy izany. Toa ny ZP tsy mahafeno fepetra dia olona mahery vaika avy amin'ny firenena matanjaka hafa izay tsara kokoa tsy tokony hotononina ampahibemaso.
Tsy nanao ezaka lehibe izy mba hanatsara ny UNWTO.
Mila raisina ho matotra ny UNWTO. Ity Sekretera Jeneraly ity dia tsy manome aingam-panahy - James Hepple, Tourism Analytics
Tsy fahampian'ny fahamendrehana; tsy fahampian'ny mangarahara; ny fanaovana kolikoly, hala-bato inona koa no tokony ho fantatrao?
Mila mivoaka izy ary mamela olona mahay kokoa hitantana UNWTO
Raha misy fisalasalana xam ny dingana Manao fifidianana vaovao. Raha tena nandresy tokoa izy dia tsy mampaninona ny hitsangana indray.
Amin'ny maha mpiasan'ny UNWTO teo aloha dia tsy manaiky ny fomba fitantanana ny andrim-panjakana izay nanompoako tamim-pahatokiana nandritra ny 36 taona aho!
TSY azo antoka fa tsy manampy ny neoliberalisma
Tume for change. Mila fitarihana matanjaka sy politika kely kokoa ny indostria. Plus mila fiaraha-miasa bebe kokoa eo amin'ireo firenena sy fikambanana mifandraika amin'ny fizahantany.
Raha voamarina izy dia mety hiafara amin'ireto manaraka ireto ny sasany na izy rehetra Ny fahaverezan'ny mpikambana sy ny famatsiam-bola avy amin'ny mpikambana mandoa ny sarany, Ny fahaverezan'ny fahatokisana , Ny fahafatesan'ny UNWTO amin'ny farany na ny fahaverezan'ny fiaraha-miasa amin'ny Firenena Mikambana.
Be loatra ny fisalasalana niaraka tamin'ny fampielezan-keviny. Ny fifantenana ireo firenena notsidihiny, tamin'ny iraka nataon'ny UNWTO sy ny valin'ireo fitsidihana ireo dia mampisalasala ny amin'ny mangarahara amin'ny fanohanana azony avy amin'ny Filankevitra mpanatanteraka. Ny fifindran'ny toerana ho any Madrid sy ny tsy firaharahiana ny an'i Kenya dia antony fanampiny hitadiavana vahaolana tsy misy fifanoherana.
TSY olona marin-toetra izy ..mahamenatra ny fampielezan-kevitra farany niarahana tamin'ny Minisitra Walter Mzembi..
Raha misy fisalasalana momba ny mangarahara amin'ny fomba nahatongavan'ny komity Mpanatanteraka tamin'ny fanapahan-keviny dia tsy tokony hatao toy ny fitomboka fingotra ny Fihaonambe.
Vao haingana izy no namindra ny Fihaonambe avy any Afrika ho any Madrid, Espaina nefa tsy nisy fiheverana an'i Kenya izay nampiakatra ny fanapahan-kevitra.
Mila fitohizana amin'ny famerenana ny fizahantany amin'ny ara-dalàna. Amin'izao fotoan-tsarotra sy hetsika tsy mbola nisy hatrizay izao dia tokony hanana olona zatra amin'ny raharahan'ny Fizahantany isika ary manangana tambajotra miaraka amin'izao tontolo izao.
Kolikoly izy ary nandrava ny fikambanana UNWTO mila mpitondra fa tsy mpanao didy jadona.
Mila fifidianana madio isika
Ny jeneraly Zurab Pololikashvili dia nofidian'ny Filankevitra Mpanatanteraka indray tamin'ny Janoary tao anatin'ny toe-javatra mampiahiahy. Manantena aho fa hisy fahazavana marina sy matotra ho tonga amin'ny fanahin'izy ireo ary koa ho an'ireo governemanta avy amin'ny firenena izay solontenany.
Very ny mangarahara, ny fitondran-tena ratsy amin'ny sehatra tsy miankina, ny lalao be loatra amin'ny fitazonana ny asany, ny tsy fisian'ny matihanina sy ny fanatrehana, ny fampiroboroboana ny olona diso ao anatin'ny UNWTO satria nofidian'ny tombontsoa hafa ankoatra ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao matihanina.
Mila fiovana isika. Tsy maintsy omena fahafahana hitarika ny UNWTO voalohany i Afrika.
Izy dia vao haingana. Tsy mahalala ny ABC ny fizahan-tany. Mampiroborobo ny olony amin'ny tsy firaharahana ny fitsipika sy ny fitsipika izy.
Tsy mahafeno fepetra amin’ilay asa fotsiny izy.
Fandraisana anjara amin'ny politika nasionalin'i Espaina manatrika ny kongresin'ny Antoko Malaza (antoko mpanohitra). Araka ny Biraon'ny Etika ao amin'ny Firenena Mikambana: – Tsy maintsy miala amin'ny hetsika ara-politika mety hanimba ny Firenena Mikambana ianao, na hampihena ny fahaleovantenanao sy ny tsy fiandanianao. – Fadio ny mampiroborobo ny toerana ara-politika nasionaly na ny fanehoana fankasitrahana ireo kandidà politika eo am-piasana. – Aza misolo tena ny tenanao ho mpiasan'ny Firenena Mikambana rehefa manao sonia fanangonan-tsonia na manao hetsika ara-politika. Nasehon'i Zurab tao amin'ny Twitter ny fandraisany anjara amin'ny politika espaniola: https://twitter.com/pololikashvili/status/1443230304240644096?s=20 https://twitter.com/pablocasado_/status/1443302875556466690?s=20
Fanendrena ny Talen'ny Mpikambana Mpiara-miasa, Atoa Ion Vilcu: Ambasadaoron'i Romania teo aloha tany Espaina, raha i Zurab kosa no Ambasadaoron'i Zeorzia – Tsy misy soritra ny traikefa mifandraika amin'ny fizahantany amin'ny traikefan'i Ion Vilcu.
Namoy ny feo rehetra tao amin'ny UNWTO ny mpikambana ao amin'ny Affiliate. – Maro ireo mpikambana ao amin'ny Affiliate no nampita ny fahasorenany tamin'ny UNWTO noho ny tsy fisian'ny asa atao, ary ny Tale dia miara-miasa amin'ny vondrona mpikambana voafantina ihany, izay tonga any Madrid ny ankamaroany.
Ny ahiahy amin'ny toe-javatra mampiahiahy amin'ny fifidianana indray dia manamarina ny tsia
Solontena mahantra amin'ny fizahan-tany manerantany indrindra mandritra ny krizy Covid-19.
Pololikashvili dia nitondra fanafintohinana ampahibemaso, odium ary fanamavoana ny UNWTO. Tena nahatsiravina ny fitondran-tenany ratsy. Tsy mendrika mihitsy ny hitondra ity fikambanana ity ary mbola handoto ny lazany sy ny fahamendrehany raha mbola eo amin’ny toerany. Good Riddance hoy aho! Mila kandidà azo itokisana manana fahamendrehana ny Fikambanana izay efa matihanina amin'ny indostrian'ny fizahantany - olona toa an'i Carlos Vogeler avy any Espaina izay notsipahan'i Zurab ihany koa.
Tsy maneho ny soatoavin'ny masoivohon'ny Firenena Mikambana izy
Be loatra ny kolikoly.
Toa manao kolikoly tanteraka. Tsy manao UNWTO amin'ny fiheverana maneran-tany, mainka fa ny fandaharam-potoana momba ny faharetana sy ny etika: Ny sisa amin'ny UNWTO/UN dia tsy maintsy miditra mba hampitsahatra ny fahasahiranana sy ny henatra.
Ampy izay! Ny sekretera jeneralin'ny Fikambanana ONU dia tokony ho olona misokatra sy mandefitra kokoa. Ary mazava ho azy fa mahay kokoa amin'ny lafiny rehetra. Tsy misy toerana ho an'ny tsikombakomba sy lalao miafina ao amin'ny Fikambanana ambaratonga toy izany. Taleb Rifai no nitondra azy teo amin'io toerana io ary tsaroanay tsara izany! Ho fankasitrahana izany, noho ny fialonana ny laza sy ny maha-zava-dehibe an'io olona io ho an'ny fiaraha-monina maneran-tany, dia nitoka-monina tamin'ny UNWTO izy ary nijanona ny fifandraisana rehetra. Tehamaina izany tsy an'i Taleb ihany, fa ireo rehetra izay nifidy an'i Pololikashvili ihany koa tamin'ny alalan'ny tolo-kevitr'i Rifai. Izao tontolo izao manontolo.
Zurab Pololikashvili dia tsy manara-dalàna ary tsy manana fahaiza-manao ho sekretera jeneralin'ny UNWTO - tokony hohelohina izy.